Umphakathi unikezwe amatayitela | News24
LAST UPDATED: 2020-01-19, 11:31
Umphakathi unikezwe amatayitela
UMeya waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu ebambisene nezikhulu zakwaMasipala kanye nezivela kuMnyang wezokuHlaliswa kwaBantu unikeze umphakathi waseMandeni amatayitela ngeledlule. Isithombe: Sithunyelwe
UMASIPALA waseMandeni ubambisene noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu unikeze abahlali baseHighview Park, Sundumbili kanye nabaseHlomendlini amatayitela emcimbini obuse hholo lomphakathi iSibusisiwe ngoLwesihlanu oledlule, ngomhlaka 29 kuNtulikazi (July).
UMeya waseMandeni uMnuz Siphesihle Zulu uthe: “Njengo masipala sithanda ukubonga uNgqongqoshe wezokuHlaliswa KwaBantu uMnuz Ravi Pillay ngokuthi lo Mnyango uyaqhubeka nokwakhela abantu izindlu futhi uphinde ubanikeze amatayitela. Lamatayitela azokwenza umehluko omkhulu kubantu baseHighview Park, Hlomendlini nabaseSundumbili. Kumanje sisebenza ngokuzikhandla ukuqinisekisa ukuthi umphakathi waseNyoni, eCannan, nawo uyawathola amatayitela,” kusho yena.
Ekhulumela umasipala waseMandeni, uMnuz Themba Mthembu uthe kukhishwe amatayitela angu-24. Uqhube ngonxusa umphakathi ukuba ulande amatayitela awo njengoba kukhona amatayitela angu-500 ahlezi ehhovisi lakwamasipala.